fauxet fandroana fandroana tokana nikela nika
naoty 5.00 avy tany 5 mifototra amin'ny 18 mpanjifa naoty
Ny fanangonam-boary dia mitondra anao ny fandaharam-potoana tsy voafetra raisina amina fomba vaovao ho an'ny faritra samihafa amin'ny efitrano fandroana. Manantona horonam-baravarankely fandroana vita amin'ny rindrina amin'ny faran'izay maro samihafa
2321501 torolàlana fametrahana
 Ny famolavolana kodiarana triple-US
 Nihosihosy nikororoka mahery
 vita amin'ny fitaovana avo lenta
 Tazana tokana azo atao
 Mitahiry rano hatramin'ny 50% miaraka amina mpanamboatra maoderina
 fe-potoana fanolorana 3 taona
SKU: 2321501 Sokajy: Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana, Faucets fandroana finday Tags: 1 Fehifehy, 1 Tolefo, jiro fandroana
Faucet tena kanto, Superve Quality ary fametrahana esy
Ity vokatra ity dia nanana endrika tsy manam-paharoa ankoatra ny tantana tokana, izany no antony nividianako. Tena afa-po amin'ny kalitao sy ny faran'ny vokatra aho ary faly amin'ny fividianako.
Nividy an'ity aho mba hanoloana faucet 2-misy, 3-lavaka ao amin'ny fandroako. Na dia kely loatra aza ny lavaka afovoan'ny zava-poana ary mila atsofoka hivoahana amin'ity faucet vaovao ity dia nanarona ireo lavaka 3 ny takelaka niaraka tamin'ity faucet ity.
Ity faucet ity dia mampiasa fittings vita amin'ny kalitao sy maoderina ary varahina. Ny peratra afovoany dia manana peratra varahina hiarovana ny paompy amin'ny zava-poana sy visy 2 amin'ny lafiny roa amin'ny peratra mba hahazoana antoka fa tery. Toa izany no mampiditra fantsom-bolo mahafinaritra amin'izao andro izao, izay tiako fa sarotra ny mahazo torolàlana mety amin'ny toerana tery raha tsy misy visy 2.
Ny sakan'ny tatatra dia tsy mipetaka tanteraka ao anaty fitoerako, saingy tiako io fa io dia fantsom-panafody manakaiky kokoa fa tsy manana bara izay tarihinao. Ny fahasamihafana amin'ny fantsona mainty sy ilay fantsakana fotsy dia tsara. Mety manahy ny olona sasany fa plastika ilay tatatra, ka marihina izany. Tsy maintsy ho hitako ny fijoroany rehefa mandeha ny fotoana.
Tsara ny manamarika fa nanao izany karazana fantson-drano tsotra izany aho taloha. DIY'er mora ampiasaina aho, fa tsy mpitrandraka za-draharaha velively. Ny fitaovana sy fitaovana nampiasako dia nahitana valizy, lakandrano fantsom-bokotra, biriky, siny, lamba famaohana, puty vita amin'ny fantsom-boaloboka, kasety teflon, fitaovana fantsom-boasary Rosi EZ Change (ary lavaka fahitana + 1 1/2 ″ hanovana ny tsy vanona).
Tena mahavariana ahy ity faucet ity. Miorina tsara izy io, mavesatra, tsara tarehy sy miasa tsara. Rivotra ny fametrahana azy, saingy somary fohy kosa ny zotra famatsiana. Tsy misy ahiahy. Ny mpanamboatra aza dia nanome kasety Teflon. Ny hany mba iriko hananana dia karazana plastika spacer ao ambanin'ny lovia fametahana mba hahafahana manamafy kely kokoa. Azoko antoka fa afaka mamorona zavatra aho. Amin'ny ankapobeny, ity dia faucet iray.
Araka ny nomarihin'ny sasany, ny fanamafisana ny faucet dia misy fironana hanondrahana ny takelaka fanaovana takelaka. Ny vahaolana narosoko tamin'io dia ny fampiasana o-peratra manodidina ilay tanany misy kofehy izay lalovan'ny fantsona. Ny peratra o dia tokony ho lehibe ampy hifanaraka amin'ilay tanany nefa kely ampy hiditra amin'ny takelaka misy azy. Nasiako vitsivitsy tamin'ireny mba ho avo kokoa noho ny haavon'ny takelaka ny haavon'ny stack. Ny o-peratra dia manana bonus fanampiny satria manampy amin'ny foibe ny faucet sy ny takelaka fanaovana takelaka. Tamin'ity fomba ity dia afaka nanamafy ny faucet aho mba tsy hihetsika ary tsy hiankohoka ilay lovia.
Tena tiako ity faucet ity. Tsipika mahafinaritra izy io ary mahavariana ny fahatsorana. Namboarina tsara, tsy mora vidy amin'ny lafiny rehetra. Ny faritra rehetra dia mora fantarina ary mora ny nametraka azy. Tsy plumber aho ary manana traikefa kely, tiako fotsiny ny manandrana zava-baovao ary tena afaka nametraka izany aho ary niasa tao anatin'ny adiny iray.
Saika laminara ny fikorianany ary afaka mamoaka rano iray taonina izy raha avelanao.
Tena faly aho fa manana an'io ao amin'ny trano fandroana vahiny ary efa nahazo dera!
Sarobidy tsy mampino. Nampitahako ny sasany tamin'ireo faucets casting 2 na 3 heny ary tsy mampitaha azy ireo. Ity vy ity dia tapa-by mafy! Ny fahatsapana dia kalitao madio. Lehilahy mpitovo antonony aho. Tsy tokony ho faly amin'io resaka fandroana io aho fa tiako izany!
Napetrako tao amin'ny trano fidiovana taloha 60 ans izay mbola misy ny famokarana tany am-boalohany. Tsy maintsy nitariko ny lavaka afovoany tamin'ny fikosehako azy. Tsy maintsy nanao toy izany koa aho ho an'ny tatatra. Tsy nampiasa ny tatatra miaraka aminy aho, nividy asa mipoitra vy mivaingana aho. Io dia nanova ny efitrano fidiako ary nanome azy fahatsapana avo lenta kokoa, na dia ny fanasana tanana fotsiny aza, izay nataontsika rehetra tato ho ato.
Ny faucet Wowow dia avo lenta ary ny famolavolana dia tena kanto amin'ny vidiny. Ny vita amin'ny nikela dia manana endrika satin mahafinaritra ary mora hitazonana ny fahadiovana sy ny toerana tsy misy toerana. Ny fifehezana tanana tsotra dia mora sy mora ampiasaina. Izy io dia misy takelaka misy fonony raha ilaina ny manova ny lavaka telo ho iray, fa nitaingenako azy mivantana tsy nisy takelaka teo ambonin'ny tampon-lozako tokana. Mora ny nametraka azy, fa tandremo fa ny tsipika famahanana dia iray metatra monja ary mety mila fanitarana fantson-drano fanampiny ianao hahatrarana ireo valves fidiranao. Ity dia vokatra kanto ary sanda lehibe amin'ny vidiny.
Mahagaga tokoa! Nanontany ny plumberanay hoe aiza no ahazoanay ilay faucet satria kalitao tsara io ary te hanana iray izy. Tena manoro hevitra aho. Ambonin'izany rehetra izany dia tena tsara tarehy izy io.
S *** ny2020-07-01
Tena afa-po amin'ny paompy aho! Tsotra sy kanto ny famolavolana, izay mahatonga ny fandroako ho tsara tarehy! Ny tombony lehibe indrindra dia ny fametrahana tsotra be! Raha ny marina dia heveriko fa mila fotoana fohy ny fametrahana azy, saingy mazava sy mora azo ny torolalana. Feno dera aho noho ny fisehoan'ity faucet ity. Izaho dia nanana faucet mahazatra amerikana tao amin'ny trano fidiovana tany ambony rihana, fa tena tsy dia tsara loatra. Tiako ny fisehoan'ity faucet ity, ary tiako ny fitsaboana any ambony!
10 amin'ny 10! Nividy TELO ary tena tia azy ireo! Kalitao tena tsara ary mangalatra ny vidiny.
Ny faucet dia matevina kely kokoa na mavesatra noho ny tiako!
*** C H2020-07-15
Tiako ny fomba sy ny fomba fiasan'ny faucet, fitaovana tsara. Mahafinaritra ery
*** G E2020-07-19
Faucet fandroana voalohany novidiko! Mahagaga! Namboarina tsara sy matanjaka! Sleek ary ny fijanonana ao anaty fitoerany dia tsara. Tiako tanteraka!
Manana tobim-panandramana natsangana hijerena faucet aho.
Hiezaka ny handrava zavatra araka izay tratry ny heriko amin'ny resaka kalitaon'ny vokatra sy ny fahasarotan'ny fametrahana aho.
Amin'ny ambaratonga 1-10, hoy aho hoe 7/10 ity faucet ity raha ny fahasarotana amin'ny fametrahana azy.
Ataovy ao an-tsaina fa mety miovaova izy io amin'ny famolavolana ny fantsonanao sy ny kabinetranao.
Ity faucet manokana ity dia kalitao tsara.
Toa tsara ny vita mainty. Amin'ny ankapobeny ity faucet ity dia toa maharitra tokoa. Tiako ny tsy vita voaloton'ny famaranana noho ny endrika matte. Tsy mila kosehina tsindraindray toy ny chrome mba hitazomana ny hamirapiratra.
Ny tantana tokana dia manamora ny fisafidianana ny mari-pana amin'ny rano. Ny valizy afangaro dia miasa tsara, toy ny tokony ho izy ihany.
Ity faucet ity dia mora ampiasaina ary mihetsika tsara tsy misy olana.
Ny zava-misy fa mifanaraka amin'ny fihodinan'ny 360 degre dia miampy satria azonao atao ny mametaka azy na izany aza no tadiavinao ary mbola hihetsika amin'izay tianao izy io. Miaraka amin'ny takelaka fanaovana takelaka koa. Azonao atao ny manarona ireo lavaka tsy ampiasaina ao amin'ny fitoeranao.
Manana ny fahaizany misintona ny loha ianao, izay azo antoka fa miampy koa. Fomba famafazana marobe tsy toy ny fantsom-pitaovana hafa. Ny fototry ny toerana ivoahan'ny lohany dia noforonina tsara mba tsy hanafoana ny fantsona rehefa mandeha ny fotoana hampiasanao azy.
*** S S2020-07-22
Famolavolana tsara tarehy miaraka amin'ny faranana sy vita dia ataovy ity raha ny faucet tsara indrindra hatramin'izay. Sarotra ny milaza azy amin'ny sary fa ny faucet dia manana endrika tsy manam-paharoa mampiditra tsiranoka kely amin'ny spout, ka saika kanto kanto io. Fanorenana mafy io. Mahagaga ihany koa ilay tahony napetraka. Mandrosoa mahitsy fametrahana mora miaraka amin'ny fonon-tànana. Tsy afaka mifampatoky aho!
Mora ny fametrahana amin'ny alàlan'ny kojakoja rehetra ary omena, ny fitaovana dia toa voaorina tsara sy tsara kalitao. Ireo hosotra sy mpampifandray ireo dia nanolo ny faucet taloha tsy nisy kilema. Mikoriana moramora ny rano ary mamaly tsara miaraka amin'ny mpitantana tokana sy ny tabataba kely ary tsy misy akony toy ny faucet taloha. Kanto ny endriny ary ataovy toy ny vaovao sy maoderina ny efitrano fidiako taloha. Ny lesoka tokana dia tsy avy miaraka amina fantsom-panafody pop-up ary tsy maintsy apetrako amin'ny tanana miaraka amin'ny fitaovako taloha izany. Amin'ny ankapobeny, tsara kalitao sy mijery tsara ary tokony haharitra taona maro, havaoziko indray amin'ny ho avy raha misy olana miseho.
Ity no faucet fandroana tsara tarehy indrindra hitako. Manana endrika be dia be izy ary mavesatra be. Tena vita tsara ary miasa tsara koa. Fametrahana mora izany. Manolotra izany ho an'izay maniry fantsona maoderina sy maoderina.
Nividy an'ity aho mba hanatsarana ny fantsom-pandroako izay efa manomboka daty. Niahiahy momba ny haavon'ny fahasahiranana amin'ny fametrahana faucet vaovao aho. Na izany aza, ny fonosana dia tonga tamin'ny boky iray momba ny fomba fametrahana azy. Ny ampahany sarotra dia ny mamerina azy io amin'ny plumbing efa misy ao amin'ny trano fidiako. Saingy tsy dia ratsy loatra ny mamantatra. Na dia mihoatra ny 1 ora fotsiny aza ny fotoana fametrahana ho ahy satria mbola tsy nanao asa fantson-drano mihitsy aho teo aloha. Faly manokana aho fa niaraka tamin'ny takelaka ho an'ny fotony izy io satria ny faucet-ko ankehitriny dia nisy lavaka 3 nandavaka ny tampon'ny granite ahy ka afaka nampiasa ilay takelaka aho handrakofana ny 2 amin'ireo lavaka izay tsy nitaky ity paompy ity. Ny fananana tànana faharoa dia hanampy ahy na dia napetrako irery aza fa nampitombo ny haavon'ny sarotra.
Ny hany nampiasako dia wrentch 11mm hametahana ny fantsom-paompy ho an'ny fantson-tranoko (tsipika mafana sy mangatsiaka), mpamily visy iray hametahana ny faucet mankany amin'ny granita ao ambaniny ary fametahana hanovana ny satrony
Ny fonosana dia tonga tamin'ny fonon-tànana mba hisorohana ny fanosihosanan'ny rantsan-tànana manerana azy fa tsy nampiasaiko.
Hatreto aho dia nampiasa azy io ary ny olona rehetra ao an-trano dia mankafy ny fisehoan'ny faucet vaovao. Tena hividy faucet bebe kokoa amin'ity magazay ity aho satria mijery manavao ny faucet hafa manodidina ny trano.
Toa tsara. Somary lehibe ho an'ny efitra fandroana kely. Mita ny tsiro.
Fanatsarana tena tsara ho an'ny fandroana trano fidiovana. Tsara kalitao.